လမ်းဆုံ .....: Google Apps
မိမိရဲ့ ကိုယ်ပိုင် Domain ကို Google Search မှာ သိစေဖို့နဲ့ ကိုယ်ပိုင် Domain နဲ့ Mail Accounts တွေ သုံးနိုင်ဖို့ အတွက် Google Apps ကို သုံးကြပါတယ်.။
ပထမဆုံး Google Apps ကို သွားပါ...။
မိမိ Domain Name ကို ဖြည့်ပါ.
Get Started ကို နှိပ်ပါ။
Data အချက်အလက်များ ဖြည့်ပါ
Upload an HTML ကိုရွေးပါ
I've Complete နှိပ်ပါ။
I have complete နှိပ်ပါ။
Domain Acitve ဖြစ်ရန်အတွက် 48 နာရီခန့် စောင့်ပေးရပါတယ် ..
မိမိ Domain နဲ့ Email သုံးဖို့အတွက်ကတော့ ...
Admin ရဲ့ Username
Sign in နှိပ်ပါ ...
ပုံမှန် Gmail သုံးနေကျအတိုင်း
Mail Box ကျလာပါမယ် ..
နောက်ထပ် User Account တွေ ထပ်ဖွင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ..
Create new users ကိုနှိပ်ပါ
account 50 user ထိ ဖွင့်ခွင့်ရှိပါတယ်.။
Create new user နှိပ်ပါ။
Email settings ထဲမှာ ၀င်ကြည့်နိုင်ပါတယ်
ကိုယ်ဖွင့်ထားတဲ့ Mail address တွေ...
Mail Active ဖြစ်ဖို့အတွက်
Active Code ကို ရိုက်ပါ
I accept. Create my account ကိုနှိပ်ပါ။
Email ကိုရွေးပါ ။။
user account ကို မိမိ Domain နဲ့ Email အဖြစ် သုံးလို့ ရပြီပေါ့ဗျာ ..
Posted by Kaung Khant at 11.12.09